Bara haaraa: Oromoofi Bara Haaraa Itoophiyaa - BBC News Afaan Oromoo
Bara haaraa: Oromoofi Bara Haaraa Itoophiyaa
Itoophiyaan bara haaraa kabajataa jirti. Garuu ammoo lammileen biyyattii hedduun 'barri haaraa kun nan ilaallatu' jedhanii yaadu.
Kunis ilaalcha lakkofsi baraa ykn kaalandarri biyyattiin itti dhimma baatu 'kan koo miti' jedhu irraa madda.
Bara haaraa kana kabajuu dhabuun "akkaataan Itoophiyaadhuma mataa ishee itti ilaalu irraa madda" jedha gaazexeessaa Olaansaa Waaqumaa.
"Itoophiyaan sabootni biyyattii qabeenyaafi beekumsa isaanii walitti fidanii kan uuman miti. Barri Itoophiyaan itti fayyadamtu kunis kan gama tokko qofarraa dhufedha jedhee waanan yaaduuf ani akka bara haaraatti hin kabaju" jedha.
"Itoophiyaan amma jirtu kuni ana kan na ibsitu miti kan jedhu Olaansaan, kaalandarichi ammoo kan Itoophiyaati kanaaf ana nan ibsu" jedha.
Gama biraan Oromoon kaalandarii mataa isaa 'kan fooyyee qabu' waan qabuuf kana kan kooti jedhee hin fudhadhu jedha.
Bakka tokko tokkotti aadaa Oromoo irraa namni waa itti daddabalee kabaju jiraachuu danda'a kabaji ayyaana bara haaraa garuu aadaa Oromoo keessa hin jiru yaada jedhus qaba.
"Sirboota aadaa ayyaanaaf sirbaman yoo ilaalte kanuma Masqalaaf shamarraniifi dargaggoonni sirbantu sirbama malee kan bara haaraa aadaa keessa hin jirani" jedha.
"Lafan ani dhaladhee guddadhetti ayyaanni bara haaraa kun akka ayyaana Masqalaafi Irreechaatti hin kabajamu, warri kabajanis warra naannoo magaalaa jiran ykn amantaan wal-qabsiisanii kabajanidha."
"Kunimmoo aadaan kun hiddi isaa kan Oromoo akka hin taane agarsiisa" jedha.
"Ollummaafi jireenya hawaasummaa akkasumas dhiibbaa waggoota dheeraaf nurra[Oromoorra] gaheen ni kabajna ta'a garuu abbummaan natti hin dhagaa'amu, kan keenya jedhee hin yaadu" kan jedhu ammoo barreessaa Mootii Abbaltiiti.
Kalandarii Oromooti jedhamee wanti qixaa'ee taa'e waan hin jirreef hawaasni kanuma naannoo isaa jiru kan kooti jedhee gara fudhachuutti deemeera jedha Mootiin.
Oromoon bara haaraa qaba?
Guyyaan isaa gaafa akkanaati jedhamuu baatullee Oromoon bara haaraa ni qaba jedha Olaansaan.
"Birraan yoo bari'u, bokkaan caamee abaaboon daraaree yoo jedhu, ayyaana Irreechaa booda akka bara haaraattan ilaala" jedha.
Fulbaana 1 caalaa Masqalatu ayyaana bara haaraa natti fakkaata kan jedhu Mootiin kuni jibba kaalandara Habashaa irraa qabuuf osoo hin taane haala itti guddanne irraa madda.
"Hawaasni ani keessatti dhaladhee guddadhe gubaa gubaani haalaan kan kabajan ayyaana Masqalaati. Barattoonnis dursanii haa galmaa'an malee masqala booda barnootatti deebi'u" jedha.
Qorattoonni aadaas yaada kanarraa adda tahe hin qabani.
Ayyaanni bara haaraa 'Inquxaaxaash' jedhamee kabajamu Oromoo biratti hiikaa hin qabu, hin beekamus jedhu Yuunivarsitii Jimmaatti barsiisaan Fokilooriifi qorataan aadaa Dr. Darajjee Fufaa.
"Oromoon gaafa roobni caamee birraan bari'u baatiifi urjii ilaalee ayyaaneffata malee guyyaa kana jedhee kan kabaju hin qabu" jedhu.
Dhaha ykn Kalandarii Oromoo
Oromoon dhaha ykn kalandara waggaa 2000 ol lakkoofsise mataa isaa qaba, haalli itti lakkaa'amu garuu kan amma Itoophiyaan kan kooti jettee qabatte kana waliin adda jedhu Yunivarsitii Jimmaatti ogeessi Astiroo-Fiiziksii kaadhimama PhD Toluu Birasaa.
"Maraa ykn guyyaa torbaan hin naanna'u, kan lakkaa'amus urjii ykn bakkalcha irratti hundaa'eeti. Qulqullinaan Astiroonomii irratti hundaa'ee kan lakkaa'amudhas" jedhu.
Akka dhaha Oromootti waggaan guyyaa 354 baatilee 12tti qoodaman qaba, baatiin ammo guyyaa 29.5 qaba jedhu Obbo Toluun.
Dhakaa Booranaa Namuratungaa Keeniyaa keessa jiran irraa saayinsiin kan mirkaneesse kalandariin Oromoo umurii waggaa 2300 akka qabudha jedhu Obbo Toluun.
Jijjiirraan baraa wantoota astironomii samii keessatti mul'atan akka biiftuu ilaaluun himama kan jedhan Obbo Toluun gadi fageenyaan xiinxalamuufi qoratamuu qaba jedhu.
Kalandarri Oromoo kun ammayyaa'ee jireenya guyyuu ittiin jiraachuuf daran mijataadha jedhu.
Yuunivarsiitiin Jimmaa kana irratti saganteeffatee hojjeta akka jirus himaniiru. Ta'us kun gahaa miti hojiin jabaan hojjetamuu qaba jedhu.